के विश्व ब्यापार संगठन विघटन हुदैछ ? Globe Nepal News Portal
भर्खरै विश्वब्यापार संगठनको ११ औं मन्त्रीस्तरिय वैठक ब्युनस आयर्समा सम्पन्न भएको छ । विश्वका १२८ मुलुकका मन्त्री र चार वटा मुलुकका राष्ट्र प्रमुख नै सो भेलामा सहभागी भएका थिए । ४ वटा देशका राष्ट्रप्रमुख एकसाथ एकै मञ्चमा भेला भएर विश्वब्यापार संगठनको वैठक उदघाटन र यसको साझा लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिवद्धता जनाउनु आफैमा अहिलेसम्मको ठुलो उपलब्धि हो । र,यो काम अर्जेन्टिनामा भएको छ ।
यसपटक विश्वब्यापार संगठनले मुख्य त दुइ वटा लक्ष्य लिएको थियो । उसले मन्त्रीस्तरिय वैठक मार्फत माछाको ब्यापारमा विकासोन्मुख देशलाइ सहुलियत दिन र विद्युतीय ब्यापारलाइ विश्वब्यापार संगठनले मान्यता दिने । ३ दिन सम्मको घनीभुत औपचारिक वार्ता र अनौपचारिक वैठकमा मुलत विधुतीय ब्यापारलाइ विश्वब्यापार संगठनले मान्यता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा बढी रस्साकस्सी चल्यो । यसपटक विश्वब्यापार संगठनले यसलाइ अघि बढाउन चाहेको थियो र विश्वभरबाट भेला भएका करिव ४ हजार सहभागीबाट यसलाइ पास गराउने लक्ष्य लिएको थियो ।
विश्वब्यापार संगठनको प्रचलित मान्यता के छ भने यहा जुनसुकै राष्ट्रले आफनो एजेण्डा उठाउन सक्छ तर यसलाइ सवै सदस्य राष्ट्रले पास गर्नुपर्छ । विधुतीय ब्यापारको सम्वन्धमा पनि यहि प्रावधान चुनौतीको रुपमा रहयो । अमेरिका,चिन,युरोप र अफ्रिकाको केही देश विधुतीय ब्यापारको पक्षमा खुलेर लागे तर भारत यसको विपक्षमा उभियो । कतिसम्म भने विधुतीय ब्यापारको सामान्य तयारी समेत नगरेको भुटानले समेत विधुतीय ब्यापारको पक्षमा बोलिदियो । तर नेपालले भने विश्वब्यापारसंगठनको त्यो कुम्भ मेलामा अहिले नै विधुतीय ब्यापारमा जान हामी तयार छैनौं भन्यो । अर्थात विना तयारी यो मुद्धाको पक्ष वा विपक्षमा हामी जादैनौं भनेर उसले अडान राख्यो ।
जब विधुतीय ब्यापारको पक्ष र विपक्षमा मत वाझिन थाल्यो तब विश्वब्यापार संगठनले यसको पक्षमा माहौल बनाउन ब्युनस आयर्सको हिल्टन होटलमा भब्य कार्यक्रम राख्यो । यसको प्रमुख वक्ता थिए–चिनका अलिबाबाका सञ्चालक ज्याक माँ । होचो कदका ज्याकले आफनो प्रस्तुतीको क्रममा अबको युग नै विधुतीय ब्यापारको रहेको बताए । ढिलो वा चाडो विधुतीय ब्यापारमा नगइ हुन्न भन्ने उनको मुल भनाइ थियो । उनले भने–२सय बर्ष पहिले ब्यापार केही राजाहरुले आफनो हातमा राखेका थिए । ५० बर्ष पहिले ६० वटा कम्पनीको हातमा ब्यापार थियो । अहिले जुनसुकै युवा जो संग राम्रो विचार छ उसले त्यो विचारको अपनत्व लिन सक्छ । भोलिका दिनमा कुनै देशले बनाएको भनेर मेड इन भन्ने चलन हराउनेछ र मेड इन इन्टरनेट भनिनेछ । हामी पुरा विश्वलाइ सजिलो बनाउन चाहन्छौं । विधुतीय ब्यापारमा केही राष्ट्रले चासो राखेको मैले सुनेको छु तर विधुतीय ब्यापार विकासोन्मुख देशको लागि तयार पारिएको हो ।
नेपाल जस्तो देशले माछा र यसको ब्यापारमा चाहे जति सहुलियत वा सुविधा दिएपछि हर्ष वा विस्मात मनाउनुपर्ने खास कारण देखिएन । सिधा समुन्द्रसंग सम्पर्क नभएको र समुन्द्री खानेकुरामा निर्भर वा वानी दुवै नपरेकोले नेपालले यसमा खास चासो लिने कुरा भएन । तर,विधुतीय ब्यापारको सवालमा भने नेपाल बडा अलमलमा थियो । यसको पक्षमा भाग लिउ वा विपक्षमा भनेर आफुले बोल्ने पालो आउन्जेलसम्म पनि नेपालका अधिकारी दुविधामा देखिन्थे । ज्याक माँले विकासोन्मुख देशको लागि विधुतीय ब्यापार भनेको र नेपाल विकासोन्मुख देश भएकोले अब के गर्ने भन्नेमा सोच्नु ठिकै कुरा थियो । यहि बेलामा अर्को भुपरिवेष्ठित देश भुटानले विधुतीय ब्यापारलाइ विश्वब्यापार संगठनले मान्यता दिने कुरामा सहमति जनायो । यो सहमति संगै नेपाल भने अप्ठयारोमा परयो । अनौठो के भयो भने विश्व ब्यापार संगठनमा भुटानले भारतको भर नपरि अमेरिका,चीन र युरोपको चाहना अनुसार आफुलाइ अघि उभ्यायो । तर अनौठो उसको विधुतीय ब्यापारको सवालमा कुनै तयारी भने थिएन ।
यहि पेरिफेरिमा एफइएस जेनेभा र विश्वब्यापार संगठनको सिधा निम्ता मान्न गएको यो पंक्तिकारसंग नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर गएको मन्त्रीस्तरिय टोलीसंग भेट भयो । यहि क्रममा विधुतीय ब्यापारको बारेमा कुरा हुदा वाणिज्य मन्त्री मिन विश्वकर्मा र सचिव चन्द्र घिमिरे अब के गर्ने भन्दै थिए । यहि बेला सचिवजीले भने–विधुतीय ब्यापारमा हाम्रो खास तयारी छैन,यसको लागि समय चाहिन्छ । भारत पनि तयार देखिएको छैन । उनको यो अभिब्यक्तिलाइ नै मन्त्रीले अब औपचारिक फोरममा बोल्नुपर्ने थियो । हुनपनि गुगल, फेसवुक, टवीटर,यु टयुव सवै अमेरिकाको हातमा छ । अनि यसमा भारत जस्तो देशले किन मानोस ? तर चिनको मामला अलि फरक छ । उनीहरु अब यसमा पनि लगानी गरेर ब्यापार गर्न सकिन्छ भन्नेमा ढुक्क छन । तर,युरोप किन यसको पक्षमा छ ? अफ्रिका किन यसको पक्षमा छ ? र,भुटान किन यसको पक्षमा भयो ? यसको जवाफ त नेपालसंग तत्काल थिएन । तैपनि उ विपक्षमा उभियो । तर यसपछि एउटा सवाल भने उठयो । विश्वब्यापारसंगठनको सम्मेलनको समापन समारोहमा संगठनका महासचिव र आयोजक देश अर्जेन्टिनाको बाणिज्यमन्त्री सुशन माकोराले यो हप्ता निकै तनावपुर्ण रहेको स्विकारे । उनीहरुले ४ हजार सहभागी र सञ्चारमाध्यामका सामुन्नेमा सम्मेलन तनावपुर्ण रहेको कुनै समाधान पनि नभेटिएको बताए । अर्थात,विधुतीय ब्यापारको सवालमा धेरै रस्साकस्सी चल्यो । यसको पक्ष र विपक्षमा प्रष्टसंग देशहरु विभक्त भए । स्वयम मन्त्रीहरु उपस्थित हुदा पन समाधान भएन र यसको लागि थप दुइ बर्ष होमवर्क गर्ने सहमति भयो ।
यसपछि स्वभाविक रुपमा एउटा जिज्ञासा उठयो–के त्यसो भए विश्वब्यापारसंगठनको औचित्य सकिदै गएको हो ?
यो सवाल यस कारण उठयो कि हरेक एजेण्डा पास हुन सवै सदस्य राष्ट्रले सहमति जनाउनु पर्ने र एउटा मात्र देशले हुदैन भन्ने वित्तिकै एजेण्डा थन्किने प्रावधान छ । यस्तोमा विश्वब्यापारसंगठन कसरी चल्न सक्छ ?
विश्वब्यापारसंगठनको सम्मेलनको दौरानमा भएको एक अनौपचारिक भेटमा थिए–युरोपियन युनियनका लागि विश्वब्यापारसंगठनका राजदुत मार्क भानहेउकेलेन (।ःबचअ ख्बलजभगपभभिल ०
मार्कको विचारमा विश्वब्यापारसंगठन अप्ठयारो अवस्थामा छ । तर यसको सोझो असर भने विकासोन्मुख देशलाइ पर्नेछ । यदि विश्वब्यापार संगठन रहेन भने ठुला देशले नया कुनै अर्को संस्था बनाएर काम गर्नेछन तर साना देशले के गर्नेछन ?
-रामचन्द्र पौडेल तीस वर्षे निर्दलीय निरङ्कुसताको अन्त्यपछि भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन,...